Njakatiana taty Berlin - Nirina e.V.
Njakatiana taty Berlin
Fetin'ny Francophonie 2016
Tamin'ny asabotsy 12 marsa 2016 lasa teo no nakalazaina ny fetin'ny francophonie teto Berlin (Allemagne). Maro ny fampisehoana natao ka anisan'ny nandray anjara tao ny Masovoiho Malagasy eto Alemaina, miaraka tamin'ny tarika Njakatiana. Tsy ireo Malagasy monina eto Berlin ihany no tao fa nisy koa ireo mipetraka any amin'ny tanana hafa toy ny Bielefeld sy Oberhausen ohatra.
Nisy karazana varotra fampisehoana koa tao, araka izao hitantsika amin'ny sary izao. Nisy ny sambos sy ny nem ary ny sakafo malagasy. Ankoatra izay dia nisy koa ny fanaovana masonjohany.
Misy diso tsipelina ilay anaran'i Njakatiana etsy ambony. Azo lazaina fa kely ihany ilay trano fampisehoana ao amin'ny Centre francais. Na izany aza nahafinaritra ny lanonana
Maimai-poana moa ny fampisehoana tao. Ny fangatahan'ny mpikarakara ny fety tamin'i Njakatiana dia ny ampisehoany ireo karazan-kira manerana an'i Madagasikara. Araka ny fantantsika dia manana izany karazan-kira izany i Njakatiana, na dia izany aza anefa dia nanao hiran'olon-kafa ihany izy toy Salala, sns...
Nitohy ny hirahira
Mpihira sympathique i Njakatiana ka taorian'ny anjara nataony tany amin'ny francophonie dia mbola nihaona sy nikora niaraka tamin'ny Malagasy tany amin'ny tranon'ny Malagasy iray monina eto Berlin izy.
Nanararaotra niaraka nihira tamin'ny Njakatiana daholo izay nahatsiaro tena fa mahay mihira. Efa ho maraina ny andro vao nisaraka tao.
Misy vidéo iray hafa ity, saingy tsy dia tsara ny enregistrement.